Ruux lagu tuhunsanyahey weerarkii Stanbuul oo gacanta lagu dhigey. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Ruux lagu tuhunsanyahey weerarkii Stanbuul oo gacanta lagu dhigey.
Ruux lagu tuhunsanyahey weerarkii Stanbuul oo gacanta lagu dhigey.
Ninka oo lagu magacaabo Abdulkadir Masharipov ayeey warbaahinta dalka Turkiga sheegtay in uu yahay shaqsigii ka danbeeyay weerarki Istanbul.
Warbaahinta ayaa intaa ku dartay in lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada ammaanka ka sameeyeen degmada Esenyurt ee magaalada Istanbul.
Waxaa kale oo uu intaasi ku daray in ninkan oo asal ahaan kasoo jeedo dalka Uzbekistan uu tababaro kusoo qaatay dalka Afghanistan, kadibna soo galay Turkiga bishii June ee sanadkii 2016.
Ugu danbeyntii, ra’iisul wasaare ku xigeenka Turkiga Numan Kurtulmush oo hadal qoraal ah oo uu kaga hadlay howlgalkan soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay in dagaalka ay kula jiraan argagixisada iyo awoodaha xooga badan ee ka danbeeya uu sii socon doono ilaa ay ka dhameynayaan.
Previous articleXubno ka tirsan Beelaha Banaadiriga oo maanta kusoo baxey tartan Barlamaanka Aqalka hoose.
Next articleIska hor imaadkii ka dhacey xarunta kmg ee G/mudug oo khasaarihiisu isa soo tarayoo.